गाईलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि के भयो यस्तो अचम्म ? किसानले विश्वासै गर्न सकेनन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गाईलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि के भयो यस्तो अचम्म ? किसानले विश्वासै गर्न सकेनन्
मिनेसोटा। अमेरिकाको मिनेसोटाका किसान दम्पतीको गाईलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि जे भयो त्यो देख्दा उनीहरुलाई विश्वासै लागेन । उनीहरुको खुसीको सीमा रहेन जब उनीहरुको गाईले एकसाथ ४ बाच्छा जन्मायो । यो निकै दुर्लभ घटना थियो, किनकि गाईले ४ बच्चालाई जन्म दिएर ४ वटै बच्चा बाँच्नु निकै आश्चर्यजनक घटना हो । पशु चिकित्सकका अनुसार यस्तो घटना १ करोड १२ लाख सुत्केरी गाईमध्ये एउटामा मात्र हुन्छ । सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले गाइको हालत ठिम देखिएको थिएन र किसान दम्पतीलाई लागिरहेको थियो कि गाईको पेटमा एउटा मात्र बच्चा छ । तर, जब एकपछि अर्को गर्दै ४ बाच्छा जन्मे उनीहरुलाई विश्वास गर्नै कठिन भयो ।
यो घटना गएको मे महिनाको हो । मिनेसोटा राज्यको सेबेकामा बस्ने किसान दम्पती चक बेल्दो र देब बेल्दोको गाईले ४ बच्चा जन्माएको थियो । यो कुराले पूरै परिवार निकै खुसी थियो । एउटा गाईले ४ बच्चा जन्माउनु र ४ वटै बच्चा बाँच्नुकुनै चमत्कार भन्दा कम थिएन । गाईका मालिक देब बेल्दोले आफ्नो पूरै जीवन गाईहरुको बीचमा बितेको भए पनि यस्तो घटना पहिलोपटक देखेको बताए । देबका अनुसार यो गाई तेस्रो पटक सुत्केरी भएको हो । यसअघि दुई पटक भने यो गाईले १–१ वटा बाच्छा जन्माएको थियो । यस पटक भने उसले ४ बच्चा जन्माएको थियो र ४ वटै बाच्छा स्वस्थ थिए ।
देबकी पत्नी चकका अनुसार जन्मिएका ४ बच्चामध्ये २ बाच्छा र २ बाच्छी छन् । जन्मपछि उनीहरुले ४ पटै बाच्छालाई हरेक ४ घण्टाको फरकमा दूध पिलाए । अहिले यी ४ वटै बाच्छाबाच्छी स्वस्थ छन् र घाँस पनि खान थालेका छन् । यो आश्चर्यजनक घटनापछि उनीहरुको गाई फार्म बेल्दोज फार्ममा आउने पर्यटकको संख्या पनि बढेको बताइएको छ ।